Imidlalo emihlanu ekufuneka sinayo kwi-Ubuntu wethu | Ubunlog
ULuis Gomez | | Imidlalo
Nangona iLinux ibingelilo iqonga eliyilelwe ukudlala, kunjalo Izihloko ezikhulu zazo zonke iintlobo zeza kuye Kwaye, ngaphezulu kwako konke, kuguqulwe kakhulu okwenze ukuba uluntu lonwabele iiyure ezilungileyo zokuzonwabisa. Umkhwa wokudala imidlalo ngokukodwa kwiinkqubo zeWindows kunye neMac OS X uyatshintsha namhlanje kwaye sinetyala elikhulu kwinxalenye yeSteam kunye nokubheja okuqinileyo eyenzileyo kwi-Steam OS yayo.
Kwisikhokelo esikubonisa sona ngezantsi siyakubonisa imidlalo emihlanu ekufuneka sinayo kwi-Ubuntu yethu.
1 Umdubuli: Uloyiko lwasedolophini
2 Isicwangciso esisekwe ekujikeni: IiHedgewars
3 Ukulinganisa: FlightGear
4 Iphazili: iPingus
5 Ukulinganisa kweRetro: DosBox
Umdubuli: Uloyiko lwasedolophini
Uloyiko lwasedolophini sisihloko se- Ukudubula Abadlali abaninzi basimahla abenziwe ngu Intlabathi yeFrozen, apho kusetyenziswa i-injini ehambelana ne-Quake III Arena edumileyo kodwa ezimeleyo kuyo. Abaqulunqi bayo bayichaza njenge Umqhubi ubuchule apho Inyani ayiphikisani nolonwabo. Ngenxa yoko, ufumana isihloko esahlukileyo, esimnandi kunye nesikhobokisayo esiya kwenza ukuba udibane nabahlobo bakho.
Ngaphandle kokuba sisizukulwana samva nje, Imizobo ngaphezu kokuthobela kunye nokuqinisekisa ukudlala okufanelekileyo kumaqela anezinto eziphantsi, kodwa ezi zinto zilandelayo:
Ikhadi lemifanekiso: 8 MB ngokukhawulezisa kwe-3D kunye nenkxaso epheleleyo ye-OpenGL.
233 MHz Pentium MMX okanye 266 MHz Pentium II okanye iprosesa ye-6 MHz ye-AMD K2-350.
Imemori: I-64 MB ye-RAM, ikhompyuter ehambelana ne-100% ngeWindows XP okanye ngaphezulu.
I-100% ikhibhodi ehambelana neMicrosoft kunye nemouse, ukonwaba (ngokuzithandela)
Akukho sidingo sobhaliso, isihloko siyafumaneka kwamanye amaqonga anje ngeWindows okanye iMacintosh kwaye ukuyivavanya kufuneka ukhuphele, ufake kwaye uyidlale. Ngaphakathi uya kuba neendlela zokudlala ezilandelayo:
Bamba iflegiInjongo kukuthabatha iflegi yeqela elichasayo ulise kwiziko lekhaya.
IQela eliSindileyoPhelisa abadlali kwiqela elichasayo de kubekho umntu omncinci osindayo kwiqela lakho okanye ixesha liphelile, apho umdlalo uya kubotshelelwa khona. Imijikelo isetyenziselwa iqela ngalinye kunye neliphumeleleyo kakhulu ekupheleni komdlalo.
UkuDlalwa kweQelaUkuphelisa abadlali beqela elichasayo. Yahlukile kwimowudi yeQela eliSindileyo kule ndlela, umdlali uzalwa ngokutsha. Iqela elishenxise uninzi lwabachasi liya kuphumelela xa ixesha liphelile.
Indlela yokumpompa: Kuyafana neQela eliSindileyo kodwa ngomahluko wokuba elinye iqela kufuneka lenze ibhombu kwindawo yotshaba kwaye elinye iqela kufuneka likuthintele oku kungenzeki.
Landela inkokheli: Iyafana neQela eliSindileyo. Inokuba inkokeli kufuneka ichukumise iflegi yotshaba ekwindawo ezingahleliwe, isizathu sokuba ezinye izixhobo kuya kufuneka zikhusele utshaba kuye. Ngokuzenzekelayo, inkokeli iqala ngesikrweqe seKevlar nesigcina-ntloko, emva koko ijikeleze phakathi kwamanye amalungu.
Konke ngokuchasene nabo bonkeKule nguqulo ayidlalwanga njengeqela, kodwa yindlela eyahlukileyo apho kufuneka ubulale bonke abanye abadlali. Umdlali obulele uninzi lwabachasi uyaphumelela.
Bamba ubambeYindlela yomdlalo apho kukho amaqela amabini ekufuneka athathe inani elikhulu leeflegi ezisasazwe kuyo yonke imephu. Ukuba iqela lithatha zonke iiflegi, amanqaku ama-5 afunyenwe, kunye neqela elinamanqaku aphezulu okuphumelela ekupheleni komdlalo.
Isicwangciso esisekwe ekujikeni: IiHedgewars
IiHedgewars Umdlalo osekwe ekujikeni ngokusekwe kwi-saga yasentsomini yeentshulube kodwa iinkwenkwezi zeedgegehogs endaweni yeentshulube. Umdlalo uquka ukuphelisa ii-hedgehogs kwamanye amaqela athatha inxaxheba esebenzisa izixhobo ezahlukeneyo, uninzi lwazo lungaqhelekanga kwaye longeza umdlalo omnandi kakhulu kwimidlalo.
Imizobo yomdlalo yeyohlobo imifanekiso kwaye kukho iimeko ezahlukeneyo ezinokuqwalaselwa ezibonelela ngeendlela ezahlukeneyo kwimidlalo kwaye inendlela yokufa ngequbuliso engayandisisi nganye nganye ngokungapheliyo. Njengoko sisitsho, kunjalo kumnandi kakhulu ukudlala nabahlobo kunye nosapho kuba kumjikelo ngamnye iimeko zingahleliwe kwaye zivumela iziphumo ezahluke kakhulu.
Umdlalo unelayisensi ye-GPLv2 kwaye iyafumaneka kwiqonga lomnqamlezo kusasazo oluninzi lweLinux (Ubuntu phakathi kwabo), iiWindows kunye neMac OS.
I-FlightGear I-simulator yendiza yasimahla kwaye okwangoku yenye yezona zinto zibalulekileyo simahla xa kuziwa kwimidlalo yokulinganisa yeenqwelomoya. Ikhowudi yayo ivulekile kwaye iyandiswa kwaye, ngenxa yoku, inenani elikhulu lezongezo ezenziwe ngabantu besithathu
Mhlawumbi kuphela kwenkqubo yohlobo lwayo ikhowudi yayo isimahla kwaye ingenanjongo yokufihla ukuba isebenza njani ngaphakathi, nto leyo eyenza ukuba ibanzi. Nangona kukho abadlali abathathela ingqalelo ukuba ayinakugqitha kwinqanaba lomzobo weyona mveliso zorhwebo zibalaseleyo, imodeli yomzimba yokubhabha kunye nokunyaniseka kolawulo kukwinqanaba elifanayo okanye eliphezulu kunezifanisi ezifanelekileyo. Kungenxa yokuba iFlightGear yaphuhliswa kwasekuqaleni ngeprofayile ephezulu yobuchwephesha kunye nesayensi. Ixhasa i-OpenGL kwaye ifuna ukukhawulezisa izixhobo ze-3D.
Umdlalo uyafumaneka kumaqonga aphambili, iWindows, iMac OS X kunye neLinux kwaye, phakathi kweempawu zayo eziphambili, oku kulandelayo:
Ibanzi kwaye ichanekile uvimba weenkcukacha zehlabathi.
Izikhululo zeenqwelo moya ezingama-20000, malunga.
Un uyilo lomhlaba oluchanekileyo Ukusuka kwihlabathi liphela ngokusekwe kwidatha ye-SRTM. Iindawo zibandakanya amachibi, imilambo, iindlela, oololiwe, iidolophu, iidolophu, umhlaba, kunye nezinye izinto onokukhetha kuzo.
Ine- eneenkcukacha kwaye ichanekile imodeli yesibhakabhaka, ezineendawo ezichanekileyo zelanga, inyanga, iinkwenkwezi neeplanethi zomhla nexesha elichaziweyo.
Inenkqubo yokuvulwa kunye nokuguquguquka kweenqwelomoya ivumela ukwandisa inani leenqwelo-moya ezikhoyo.
Oopopayi bezixhobo ze-cockpit banamanzi kwaye bagudile kakhulu. Ukuziphatha kwezixhobo kumodareyithisiwe kwaye iimpazamo kwiinkqubo ezininzi ziphinda zenziwe ngokuchanekileyo.
Inenkxaso yabadlali abaninzi
Inendlela yokulinganisa yendlela yokwenene.
Kukho imeko yemozulu eyiyo Ibandakanya zombini ukukhanya ukusuka elangeni, umoya, imvula, inkungu, umsi kunye nezinye iziphumo zomoya.
IPingus Yiyo ethandwayo kakhulu umdlalo wamandulo Lemmings. Oomatshini bayo bagcinwe ngokupheleleyo, kwaye injongo yethu kukukhokelela koonombombiya ecaleni kwenqanaba lokuphuma. Umdlalo uhamba ngezigaba ezahlukeneyo kwaye siya kuba nezakhono ezahlukileyo zokunika oonombombiya ukuba bakwazi ukuphuma kwinqanaba ngemibala ephaphazelayo. Umceli mngeni ayikukufumana nje kuphela ezi zinto zincinci ziphilayo, kodwa kuku kufuneka sihlangabezane neemfuno zexesha kunye nenani lobomi obusindisiweyo, Eyonyusa ubunzima bomdlalo.
Njengoko imidlalo iqhubeka, iimfuno ziya kuba nkulu kakhulu kwaye kuya kufuneka sizikhame iintloko zethu ukuze sikwazi ukusombulula iiphazili ezahlukileyo eziqulethwe sisigaba ngasinye. Isiluleko esinye, kukho amaxesha apho ukubingelela kwezinye iiphengwini kuyimfuneko ekusindiseni abanye.
Umdlalo ubonakalisa isitayile sokuzoba esinentliziyo elula kakhulu kunye nemizobo enemibala. Akukho zingoma okanye isandi esifanelekileyo ukuphawula, benza nje umsebenzi. Ulawulo lulula kwaye lunomdla kakhulu kwaye zonke zisebenza ngegundane, ke kwimizuzu embalwa uya kuba nakho ukuqonda ubuchwephesha bomdlalo kwaye uya kugxila ngokupheleleyo. Ungaphoswa lithuba lokuzama le klasiki yemidlalo yeLinux.
Ukulinganisa kweRetro: DosBox
Ngaphandle komdlalo ngokufanelekileyo, I-DosBox mhlawumbi kunjalo eyona x86 PC iqonga lendawo yokulinganisa indawo apho. Ngayo ungabaleka phantse nawuphi na umdlalo okanye isoftware eyayisekwe kwimeko ye-DOS yakudala, iWindows 3.11 kunye neWindows 95. Ukusebenza kwayo ngokubanzi, nangona kulunge kakhulu ngamandla ekhompyuter yangoku, ayisoze ifike kwinqanaba lenyaniso izibuko, kwaye asiyonjongo yayo. I-DosBox inemifanekiso emininzi ephuculweyo kwaye ivumela ukulinganisa ii-disk drive, amakhadi esandi, abalawuli iphedi yemidlalo kunye nezinye izixhobo ezininzi ezonyusa kakhulu amava okudlala kwezihloko ezindala.
Sishiye ngasemva imidlalo emininzi oya kuthi uyiphose: ukulinganisa indawo, amaqonga, imizobo kunye neetetera ezinde. Khuthaza kwaye ubeke izimvo zeziphi onokuzibandakanya kwaye ngoba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ubuntu » Imidlalo » Imidlalo emihlanu ekufuneka sinayo kwi-Ubuntu yethu
kuba kwisihloko ubeka imidlalo emi-5, beka emi-5 kwinqaku, akunjalo? Yiza, uthini ngeDabi leWesnoth? Ngumdlalo wokuqala endakha ndawufaka, iklasikhi ngaphakathi kweLinux. Isicwangciso kunye nefantasy ngobuninzi.
I-Wesnoth elungileyo kakhulu.
Enkosi ngesilumkiso, sele ndiyilungisile. Umdlalo ojolise kuwo ulunge kakhulu.
Phendula uLuis Gómez
Luis wakudala ndiyazi ukuba lo msonto awulunganga ukupapasha le kodwa andazi ukuba ndithini enye into kwaye ndinengxaki nokubuntu bam 15.10 kwaye loo nto ayiliboni igalelo langaphambili lesandi, mna cacisa; Ndinayo inqaba yedesktop eza neziphumo zangaphambili zeemicrosoft kunye nee-headphone, kwaye xa ndiqala inkqubo andiva sandi apho, nangona ngezithethi ezixhume kwimveliso yangemva yenqaba, ukuba kuvakala kuyinto eqhelekileyo ngelo xesha ndenze ntoni? Into endihlala ndiyenza kukuzilungiselela ngokukhetha okanye ngokukhetha izandi kwi icon ecaleni kwewotshi kwaye kwenzeka ntoni maxesha onke ndiqala kwakhona inkqubo kufuneka ndenze umsebenzi ofanayo kwaye enye into kukuba ukuba ndidibanisa ezinye ne-USB apho iyandicima isandi kuzo zombini izithethi zedesktop kunye nee-headphone ze-usb nangona iyasazi isixhobo. Sele ndikhangele kwezinye iiforamu, ndathumela i-imeyile kde kunye ne-canonical ndizamile ukuthetha nomntu kwi-IRC kodwa akukho mntu uphendulayo.
UFreddy Agustin Carrasco Hernandez sitsho
Bendingazi ukuba kukho iintshulube zelinux! enkosi Ubunlog, uyenzile imini yam! 🙂
Phendula uFreddy Agustín Carrasco Hernández
UAlejandro TorMar sitsho
Inyani? Ewe inqaku, nangona kukho imidlalo engathathi ntweni kwimizobo, ndingathanda ukubaxhasa kunye nomzami wokubaleka ukuba ayilunganga ku-Ubuntu nakwi-Xubuntu ifuna ukuxhomekeka okukhethekileyo (Ngaphandle koko inobunzima obungaphezulu kwe-GTA). Kule nto kufuneka siqhubeke nokuxhasa i-GNU / Linux, sisengxakini kakhulu ngemidlalo ethile
Phendula kuAlejandro TorMar
Kwaye ngaba bakwiindawo zokugcina?
I-Orlando iyanetha sitsho
Ndiyivula njani i-pc yam kukuba ndilibale iphasiwedi kwaye andazi ukuba ndiyisusa njani ndineenyanga ezi-3 ndingenakhompyutha
Phendula u-orlando llovera
Kuya kufuneka "uhlele" igrub ukunyusa isahlulelo sengcambu kwaye utshintshe iphasiwedi
iilitha ze-lautaro sitsho
eminye imidlalo ebalaseleyo
Phendula kwiimvalo ze-lautaro
UCami noMari sitsho
Yeyiphi eminye imidlalo kaway emnandi kakhulu?
Phendula Cami nase Mari
Ex player kwiifestile sitsho
Phendula umdlali we-Ex kwiifestile
Phendula u thiago
Uyifaka kwaye uyisebenzise njani iHardInfo, ulwazi olupheleleyo lwePC yakho kunye nobuntu